आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण ( आइतवार, बैशाख २२, २०७६)
कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेको छ । उक्त बोनस शेयर शेयरधनीको हितग्राही खातामा जम्मा भएको छ । कम्पनीले चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा रू. ४ करोड २८ लाख नाफा कमाएको छ । यो नाफा गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ८५ प्रतिशत बढी हो । सो अवधिमा कम्पनीले रू. २ करोड ३० लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ६३ करोड ३५ लाख छ । बिहीवार भएको शेयर कारोबारमा खरीद चापको तुलनामा विक्री चाप बढी छ । सो अवधिमा ३ हजार १ सय ११ कित्ता शेयर विक्री गर्ने र १ हजार ६ सय २३ कित्ता शेयर खरीद गर्ने माग थियो ।
2019-05-05 - 46 view(s) - abhiyan